Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland oo sheegay in Beesha Dhulabahante aysan sinaba u midoobi karin • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland oo sheegay in Beesha Dhulabahante aysan sinaba u midoobi karin
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland oo sheegay in Beesha Dhulabahante aysan sinaba u midoobi karin
May 27, 2018 - By: HORSEED STAFF
Col Maxamed Kaahin Axmed, Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland
Cod ka fakadey Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland Korneyl Maxamed Kaahin Axmed ayuu ku sheegay in Beesha Dhulabahnte aysan sinaba u midoobi karin wakhtigan lagu jiro. Codkan oo si weyn ugu baahay baraha Bulshada ayaa Horseed Media baaritaan ay sameysey ku xaqiijisey in codkaasi yahay kii Maxamed Kaahin.
Wasiirka ayaa ka hadlaya arrimo xasaasi ah, waxaana codku uu yahay mid la socda wakhtiga hadda taagan. Hadalka Col. Maxamed Kaahin Axmed ayaa daba socda shirar iyo cod ka soo baxay odoyaasha Beesha Dhulbahante ee Laas-caanood kuwaas oo sameeyey saameyn weyn. Caaqil Axmed Gaas Hoolif oo Laascaanood ka hadley ayaa baaqii ka soo baxay saameyn weyn yeeshay, waxaana ay sababtey in la caburiyo Laas-caanood, Somaliland ayaa amar ay soo saartey sheegtey in aan wax shir ah lagu qaban karin Laas-caanood, saxaafadduna aysan baahin karin.
Maxamed Kaahin ayaa odaygii Laascaanood ka hadley sheegay in uu yahay oday isku-daran ah ama Khalaf ah oo qalinka laga kor qaadey. Kaahin wuxuu sheegayaa in beesha Jaamac Siyaad dhibaato badan ay gaartey saddexdii dagaal oo dhimasho 100 gaartey ay ku dhacdey. Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Somaliland ayaa sheegay in ay kala jejebiyeen Dhulabahantaha oo qoloba gaar ula shireen.
Col. Maxamed Kaahin wuxuu sheegay in Beesha Dhulabante wax ay ku midoobaan ay adag tahay, marka laga reebo Caadifadda guud, sababta ugu weyna waa maqnaanshaha hoggaaminta ayu yiri Maxamed Kaahin.
Codka ka fakadey Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa ku soo beegmaya iyada oo dadka reer Sool ay sheegeen in aan cidna wakiil uga ahayn xuduud Isticmaar ka tegay, ayna ahaayeen kuwii Isticmaarka la diriray oo xornimada soo hoyey.
Odoyaasha Maxamed Kaahin u jawaabayo ee ka hadley Laascaanood ayaa ka horyimid dagaalada ka socda Tukaraq, waxaana ay ugu baaqeen wiilashoodu in ay dagaaladaas isaga baxaan, sidoo kale waxay sheegeen in Somaliland isaga baxdo dhulkooda.
Dhegayso codka ka fakadey Maxamed Kaahin https://horseedmedia.net/wp-content/uploads/2018/05/Maxamed-Kaahin.mp3
Hoos ka daawo Warkii ka soo baxay odayga uu Khalaf ama Asaasaq ku sheegay.